Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Oselavir ọgwụ mgbochi nje ọhụrụ amalitela na China
Hetero, ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọgwụ kwụ ọtọ n'ụwa niile na Shenzhen Beimei Pharmaceuticals jikọtara ọnụ mara ọkwa na ha enwetala ikike mbubata ọgwụ maka Oseltamivir phosphate n'okpuru aha aha Oselavir® sitere na onye na-ahụ maka ọgwụ China, National Medical Products Administration (NMPA).
Oseltamivir phosphate bụ ọgwụ mgbochi nje a na-eji na-agwọ nnukwu ọrịa influenza na-enweghị mgbagwoju anya na ndị okenye, ndị nọ n'afọ iri na ụma na ụmụaka (≥2 izu). A ga-eme Oselavir® na China n'ụdị usoro onunu ogwu - 12.5ml: 75mg ntụ ntụ maka nkwusioru ọnụ.
WHO kwuru na influenza nke oge a nwere ike ịkpata ọnwụ 290,000-650,000 kwa afọ n'ihi ọrịa iku ume naanị. Atụmatụ ahụ anaghị eburu n'uche ọnwụ sitere na ọrịa ndị ọzọ dị ka ọrịa obi, nke nwere ike ibute influenza1.
Dr. Vamsi Krishna Bandi, onye isi nchịkwa, Hetero Group of Companies kwuru, sị, "Anyị nwere obi ụtọ na Hetero na mmekorita ya na Shenzhen Beimei Pharmaceuticals, China, natara nkwado nke Oselavir® (Oseltamivir) na China. Nke a bụ nkwado ngwaahịa mbụ maka Hetero na China, anyị gbalịkwara iweta ngwaahịa ndị ọzọ na China n'ọdịnihu dị nso. "
Nwada Guangmei Wu, Onye isi ala na onye isi nke Shenzhen Beimei Pharmaceuticals kwuru, "Site na ntụkwasị obi na nkwado n'etiti ndị otu Beimei na Hetero, Oselavir® malitere na China dị ka ngwaahịa Oseltamivir nke China mbụ kwadoro n'ụdị usoro ọgwụgwọ ụmụaka. M na-ekwupụta ekele maka ndị otu Hetero maka ịrụsi ọrụ ike na mbọ ha na usoro mmepe ngwaahịa, ngwa ndebanye aha na nkwadebe mmalite maka Oselavir®. Anyị na-atụ anya inyocha ngwaahịa ndị ọzọ na Hetero maka ahụike ụmụaka zuru ụwa ọnụ n'ọdịniihu.